डब्ल्यूएचओ « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकद्वारा खोप केन्द्रको अवलोकन
शुक्रबार महानिर्देशक गेब्रेयससले पाटन माध्यामिक विद्यालयस्थित खोप केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको हो । खोप केन्द्रबाट अहिले १५ महिना भन्दा माथिका र १५ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप सञ्चालन
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । बिहीवार काठमाडौं आइपुग्नु भएका डा. गेब्रेयससले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई सिंहदरबारमा भेट्नुभएको
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडानोम गेब्रेयससले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टलाई सामान्य ठान्नु भ्रम रहेको दोहोर्‍याउनु भएको छ । जेनेभामा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गेहब्रेयससले ओमिक्रोन भेरियन्टले
कोरोना भाइरस उत्पत्तिबारे चीनलाई थप दबाब दिन सकिँदैन– विश्व स्वास्थ्य संगठन
काठमाडौं, जेठ २५ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उत्पत्तिबारे चीनलाई थप दबाब दिन नसकिने जनाएको छ । डब्ल्यूएचओका आपतकालीन कार्यक्रमका प्रमुख माइक रयानले चीनलाई कोरोना
चीनको ‘सिनोभ्याक’ खोपले पायो डब्ल्यूएचओको अनुमति
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चीनको सिनोभ्याक कम्पनीको कोभिड खोपलाई पनि आपत्‌कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। सङ्गठनले अनुमति पाउने यो दोस्रो चिनियाँ खोप हो। यससँगै विश्वभरि खोप वितरणका निम्ति स्थापित
डब्ल्यूएचओको टोली वुहानको भाइरस प्रयोगशालामा
काठमाडौं, माघ २१ । चीनमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक टोली कोरोना भाइरस अनुसन्धानका लागि वुहानस्थित भाइरस अनुसन्धान प्रयोगशाला पुगेको हो । वैज्ञानिक सहितको टोलीले वुहान इन्स्टिच्यूट अफ भाइरोलोजी प्रयोगशालाका
डब्ल्यूएचओको टोलीद्वारा कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे ‘फिल्ड’ जाँच सुरु
एजेन्सी । चीनको वुहान पुगेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टोलीले क्वरेन्टिन अवधि पूरा गर्दै कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा ‘फिल्ड’ जाँच गर्न सुरु गरेको छ । डब्ल्यूएचओको वैज्ञानिकको टोलीले कोरोनाको प्रारम्भिक प्रकोपसँग
काठमाडौं, माघ १ । चीनको वुहान शहरमा कोरोना महामारीको अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को टोली पुगेको छ । बेइजिङ र डब्ल्यूएचओबीच महिनौ लामो वार्तापछि दश जना वैज्ञानिको टोली पहिलो
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का क्षेत्रीय निर्देशक हान्स क्लूगले पछिल्ला केही दिनदेखि युरोपमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणको आँकडा हेरेर यसमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएकोछ । उहाँले पछिल्लो दुई
बालबालिकाका लागि मास्क लगाउनेबारे नयाँ नियम
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संठन डब्ल्युएचओले १२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाका लागि मास्क लगाउने बारेमा नयाँ नियम जारी गरेको छ । वयस्कका लागि लागु गरिएको नियम नै बालबालिकाहरुमा पनि लागु गर्न
एसीसी महिला टी–ट्वान्टी च्याम्पियनसिपमा नेपालद्वारा हङकङसामू १ सय १० रनको लक्ष्य
दाँतको रुट क्यानल गराउँदा नायिकाको अनुहार बिग्रियो